Netizen Report: Tsy mahomby amin’ny fiarovana ny zon’olombelona ireo orinasan’ny teknolojia manoloana ny fanararaotana mpiasa an-trano any amin’ny Helodrano · Global Voices teny Malagasy
Vaovaon'ny Teknnolojia sy zon'olombelona manerana izao tontolo izao.
Voadika ny 25 Novambra 2019 5:41 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Español, українська, Français, Italiano, বাংলা, English
Ny Advox Netizen Report dia manome topi-maso iraisam-pirenena momba ireo fanamby, fandresena sy vaovao malaza momba ny teknolojia sy ny zon'olombelona manerantany. Mitantara ireo vaovao sy zava-nitranga nanomboka tamin'ny 27 Oktobra hatramin'ny 10 Novambra ity tatitra ity. .
Nampiseho ny fanadihadiana nataon'ny BBC fa mampiasa fampiharana finday mahazatra sy tolotra media sosialy ny vahoaka ao Koety, Arabia Saodita sy ireo firenena hafa any amin'ny helodrano hividianana sy hivarotana mpiasa an-trano any amin'ny varo-maizina. Manamarika ny fanitsakitsahana mazava ny fitsipika mifehy ny developera (mpandrafitra kirakira) sy ny fitsipika fampiasana tolotra ho an'ireo sehatra lehibe voakasika– Instagram, Google sy Apple izany tsikaritra izany.
Matetika avy ao Afrika na Azia Atsimo-atsinanana ireo mpiasa an-trano ao amin'ny Helodrano ary karamaina ao anatin'ny rafitra “kafala” na fanohanana, ka ny olona na ny fianakaviana manakarama mpiasa no tompon'andraikitra amin'ny visa-n'izy ireo sy ny satany ara-pitsarana. Fantatra fa mahatonga fampijaliana mpiasa ilay rafitra. Tao anatin'ny taona vitsy lasa izay, nampiasa media sosialy ireo mpiasa mba hiresahany ny manjo azy ireo, saingy matetika miafara amin'ny sazy fanampiny kokoa avy amin'ireo mpampiasa azy ireo izany, na koa avy amin'ny manampahefam-panjakana mihitsy aza.
Mpanao gazety roa ao amin'ny BBC no niafina niditra tany Koety mba hitatitra ny tantara, naneho ny tenan'izy ireo ho mpivady liana amin'ny fanakaramana mpiasa an-trano izy ireo. Tao amin'ny Instagram sy Facebook, ary tamin'ny alàlan'ny fampiharana toy ny 4Sale, izay samy hita ao amin'ireo trano fivarotana fampiharana Apple sy Google, dia nahita olona mividy sy mivarotra mpiasa an-trano ao anatin'ny fanitsakitsahana ampahibemaso ny lalàna mifehy ny asa ireo mpanangom-baovao ireo. “Saika nanoro hevitra avokoa ireo mpivarotra mba hotazomina ny pasipaoran'ireo vehivavy, ary manidy azy ireo ao an-trano, tsy manome fotoana hialàna sasatra ary tsy omena antso an-tariby firy,” hoy ny nosoratan'izy ireo. Fanitsakitsahana ireo lalàna mifehy ny asa any Koety, sy ny fenitry ny zon'olombelona iraisam-pirenena avokoa ireo zavatra rehetra ireo .
Raha naneho hevitra momba ny anjara toeran'ny sehatry ny teknolojia, nilaza tamin'ny BBC ny iraka manokan'ny Firenena Mikambana, Urmila Bhoola fa “mampiroborobo ny tsenan'ny andevo antserasera ireo orinasa.” “Raha mampiantrano fampiharana tahaka ireo ny Google, Apple, Facebook, na orinasa hafa dia tompon'andraikitra ihany koa izy ireo,” hoy izy.
Rehefa nanatona ireo orinasan'ny teknolojia ny BBC manoloana ny fikarohan'izy ireo, dia naneho ny ahiahiny avokoa izy rehetra. 4Sale, izay ahafahan'ny mpiserasera manao dokambarotra, mivarotra sy mividy entana isan-karazany ohatra nanaisotra ny sehatra mpiasa an-trano tao amin'ny tranonkalany. Noraràn'ny Facebook ihany koa ny tenirohy #maidsfortransfer avy amin'ny Instagram, na dia toa tsy hanafoana ny olana aza izany. Samy nilaza ny Apple sy Google fa hikatsaka ny hanafoana an'ity karazana hetsika ity izy ireo, izay toa manitsakitsaka ny fitsipiny (raràn'ny Google ny “fampiharana izay manamora na mampiroborobo ny hetsika tsy ara-dalàna” ary mandràra ny fampiharana izay mety “mametraka olona manokana na vondrona manokana kendrena amin'ny fomba ratsy. ”) ny Apple. Nitsikera ireo mpikirakira fampiharana ihany koa ny Apple, manizingizina fa asan'ny developera ny manaja ny fepetra fampiasana tolotra omen'ny orinasa.
Hatramin'ny nisehoan'ny tantara tao amin'ny BBC.com, nanomboka nijery ny olana ny manampahefana Koesiana mpampihatra lalàna ary nanadihady olona roa farafahakeliny voalaza ao amin'ilay lahatsoratra.
Mandrangotra ny velaran'ny olana miori-paka lalina ao anatin'ny haino aman-jery sosialy lehibe sy ireo sehatra tranonkala izay manome servisy sy kirakira ahafahana mizotra amin'ny fifandraisana sy ny fifanarahana ara-barotra ataon'ny olona amina miliara isan'andro ilay fanadihadiana. Tao anatin'ny tantara fohy an'ireo orinasa ireo, tsy nisy orinasa miasa tamin'ity sehatra ity ka nahita fomba ahafahana manivana amin'ny fomba mahomby ny votoaty sy ny tolotry ny olon-kafa ho porofon'ny fahavoazana na fanitsakitsahana ny fenitra momba ny zon'olombelona, ​​araka izay hita eto.
Miaina ny lalànan'ny “fiandrianana ara-aterineto” ny ao Rosia
Tamin'ny 1 Novambra, nanomboka nanan-kery any Rosia ny volavolan-dalàna “fiandrianana ara-aterineto” mampiady hevitra. Milaza ny lalàna fa raha na rehefa misy “toe-javatra krizy” (voafaritra tsy mazava), dia ny aterineto any Rosia (na farafaharatsiny any amin'ny faritra sasany) no tapahana ara-teknika amin'ny aterineto manerantany. Milaza ireo mpanohana fa ilaina izany hetsika izany hiarovana an'i Rosia amin'ny fanafihana antserasera avy any ivelany, raha milaza kosa ireo mpiaro ny zon'olombelona sy ny fahalalahana miteny fa manohintohina ny fahalalahana an-tserasera ilay lalàna.
Didian'ny lalàna ireo mpamatsy tolotra aterineto mba hampandalo ireo fifamoivoizana iraisam-pirenena amin'ireo teboka fifanakalozana aterineto (IXPs- internet exchange points) miorina ao Rosia, izay ahafahana manao hetsika mivangongo amin'ny aterineto rehefa misy krizy. Mitaky amin'ireo mpamatsy tolotra aterineto ihany koa ny lalàna mba hametraka fitaovana manokana hanampy ny Roskomnadzor, mpanaramaso ny fifandraisana an'ny fanjakana, mba hanakanana ny fifamoivoizana aterineto tsy ilaina. Handefa ireo angon-drakitra any amin'ny trano fanarahamaso foibe ireo ary afaka mandinika ny fifamoivoizana ara-potoana amin'ny alàlan'ny fampiasana deep packet inspection (fanarahamaso lalina ireo fonosana), fomba iray heverina fa mahomby kokoa noho ny fanakanana ireo adiresy IP miavaka.Takian'ilay volavolan-dalàna ihany koa ny fananganana endrika anatiny amin'ny rafitra anaran-tsehatra (DNS) na rejisitry ny aterineto, satria rehefa misy ny fahatapahan'ny aterineto, dia tsy afaka mifandray amin'ireo lohamilina DNS vahiny ireo mpamatsy tolotra aterineto Rosiana.
Nanambara ny Roskomnadzor tamin'ny 27 septambra fa hanandrana ireo rafitra any amin'ny faritra Atsimon'i Ural izy. Tsy navoaka ho an'ny daholobe ny vokatra.
Mpitsikilo tahaka antsika? Nitsikilo ho an'ny fanjakana Saodiana ireo mpiasan'ny Twitter teo aloha
Mpiasan'ny Twitter roa teo aloha no nampangain'ny departemantan'ny fitsarana Amerikana ho mitsikilo ho an'ny governemanta Arabo Saodiana. Milaza ny fitoriana nampahafantarina tamin'ny vahoaka tamin'ny 6 Novambra fa nahazo ny tahiry manokan'ny olona tsy misy fahazoan-dalana avy amin'ny Twitter sy vaovao hafa momba ireo mpitsikeran'ny governemanta Saodiana izay misera Twitter am-pivitrihana ireo olona roa ireo, ary nizara izany vaovao izany tamin'ny manampahefana Saodiana, ao anatin'ny fanitsakitsahana ny lalàna anatin'ny Twitter sy ny lalàna Amerikana .
Iray tamin'ireo mpiasa teo aloha i Ali Alzabarah, izay nijery ny tahiry manokana voafetra ho an'ny kaonty tombanana ho 6000 eo, anisan'izany ilay mpikatroka Saodiana Omar Abdulaziz, mpisera Twitter malaza sady olom-pantatr'ilay mpanao gazety Saodiana maty nisy namono, Jamal Khashoggi. Nametraka fitoriana an'ny Twitter sy ny McKinsey, orinasan'ny mpanolo-tsaina ao Etazonia izay niasa ho an'ny governemanta Saodiana i Abdulaziz, nilaza fa “nanitsakitsaka ny fiainana manokan'ilay mpitory sy nandrahona azy sy ny fianakaviany, ny namany sy ny mpiara-miasa aminy ara-politika tamin'ny fanagadrana, fampijaliana ary koa fahafatesana mihitsy aza ireo orinasa ireo.”
Roa amin'ireo mpikatroka Saodiana sy mpanao gazety niatrika hetsika fanorisorenana voarindra izay mitondra ny marika fanaon'ny governemanta, ahitana endrika famoretana hafa, anaty aterineto sy ivelan'ny aterineto i Abdulaziz sy Khashoggi.
Tapaka indray ny aterineto ary mitohy ny fihetsiketsehana any Iraka
Mitohy ny fihetsiketseham-bahoaka manameloka ny kolikolin'ny governemanta sy mitaky ny fanatsarana ny tolotra ho an'ny vahoaka any Iràka nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana Oktobra. Nandritra io volana io, dia nametraka “tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina (couvre-feu) ao amin'ny aterineto” ny manampahefana, nanapaka ny fidirana mandritra ny alina. Tamin'ny 4 Novambra indray dia nahitana fanakatonana aterineto faobe izay niantraika tamin'ny ankamaroan'ny faritra tao amin'ny firenena ary nitohy nandritra ny 41 ora tany Iraka, araka ny fanisana nataon'ny NetBlocks, vondrona fandrefesana sivana amin'ny aterineto. Nitatitra ny Reuters fa natao ny fanakatonana ny aterineto taorian'ny fifandonana mahery vaika teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ireo “mpanafika tsy fantatra” tao Baghdad izay nitarika fahafatesana olona enina farafahakeliny.
Nisy faritra ao Pakistan tapaka nandritra ny fihetsiketsehana ny aterineto finday
Nakatona tamin'ny 22 Oktobra ireo tambajotran-data (aterineto) tany amin'ny faritra Islamabad sy Lahore nandritra ny andiana diabe nataon'ny antoko politika mpandala ny nentin-drazana manohitra ny governemantan'ny PM Imran Khan. Miahiahy ny mpanao gazety fa natao hanakanana ireo vondrona tsy handefa mivantana ny diaben'izy ireo ny fahatapahana, saingy tsy namoaka fanambarana ofisialy momba izany ny governemanta.
Nanamarika ny Media Matters for Democracy, ONG any Islamabad fa namoaka didy ny Fitsarana Avo any Islamabad tamin'ny taona 2018 fa tsy ara-dalàna ny fanakatonana fahatany nobaikon'ny governemanta tamin'ireo tambajotra. Na izany aza, notoherin'ny governemanta ny fanapahan-kevitra ary nahazo didy fampiatoana vonjimaika izy, mandra-pandrenesana ny raharaha indray ao amin'ny fitsarana ambony.
Manameloka ny fanafihana fanehoan-kevitra nomerika ireo mpikatroka Aziatiaka Atsimo-atsinanana
Vondronà mpikatroka avy amin'ny haino aman-jery malaza, fikambanana mpiaro ny fahalalahana miteny sy zo nomerika any Azia Atsimo atsinanana no nivory mba hiampanga ny firongatry ny famoretana ataon'ny governemanta amin'ny fanehoan-kevitra antserasera ao amin'ny faritra. Manondro ny fanagadrana ireo bilaogera Vietnamiana Nguyen Van Hoa sy Le Dinh Luong sy ilay Myanmar mpamokatra horonantsary nomerika, Min Htin Ko Ko Gyi, nanasongadina ny loza mihatra ao amin'ny “faritra miha didy jadona” ny vondrona amin'izany.
“Mijoro vavolombelona ho an'ireo bilaogera, mpanao fihetsiketsehana, mpiaro ny zon'olombelona, ​​mpanao gazety ary mpisera aterineto iharan'ny fanorisorenana, fandrahonana, daroka sy fanenjehana ary fanagadrana noho ny fampiasan'izy ireo ara-dalàna ny sehatra antserasera izahay,” hoy izy ireo tamin'ny fanambarana iray. Ahitana ny Association for communication Progress, Engage Media, Thai Netizen Network sy ny Viet Tan ireo nanasonia ny fanambarana.
Report on digital welfare and human rights – UN Special Rapporteur on extreme poverty and human rights Philip Alston
On the blocking of pro-choice websites: Women on Waves and Women on Web – Coding Rights, Open Observatory of Network Interference, Women on Waves and Women on Web
Afef Abrougui, Ellery Roberts Biddle, Maxim Edwards, Leila Nachawati, Taisa Sganzerla no niara-nanoratra ity tatitra ity.